merolagani - व्यापार घाटा चूलिँदो, एघार महिनामा १० खर्ब ३३ अर्ब पुग्यो
व्यापार घाटा चूलिँदो, एघार महिनामा १० खर्ब ३३ अर्ब पुग्यो
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको सरकारले घोषणा गर्दै गर्दा मुलुकको व्यापार घाटा भने आकासिँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आव २०७५/७६ का लागि बुधबार मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै एघार महिनामा व्यापार घाटा १० खर्ब ३३ अर्ब चार करोड पुगेको बताए ।
निर्यातको तुलनामा आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को एघार महिनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३४.४ प्रतिशत व्यापार घाटा पुगेको हो ।
यस अवधिमा नेपाली कामदारले पठाएको विप्रेषण आप्रवाह ७ दशमलब ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विप्रेषण आप्रवाहको सामान्य वृद्धि भएपनि चुलिँदो व्यापार घाटाले चालू खाता घाटा उच्च हुन गएको हो ।
आव २०७३÷७४ मा ८२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले शोधनान्तर बचतमा रहेको स्थिति आव २०७४/७५ को एघार महिनामा चार अर्ब ३४ करोडले घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग नौ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नका लागि पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको जनाइएको छ ।
वि.स. २०७४ असार मसान्तको तुलनामा २०७५ असार २६ गतेसम्ममा नेपाली रूपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ६.२ प्रतिशतले अवमूल्यन भई विनिमयदर १०९ रुपैयाँ ६४ पैसा कायम भएको छ । आव २०७३÷७४ मा भने नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ३.८ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आव २०७३÷७४ यता मुलुकको आर्थिक वृद्धिले लय समातेको उल्लेख गर्दै गभर्नर डा. नेपालले आव २०७३÷७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा त्यस्तो वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।
आव २०७४÷७५ को शुरुमा तराईमा आएको बाढीका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत रहेतापनि उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ८.८ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत भएबाट आव २०७४÷७५ मा उत्साहजनक आर्थिक वृद्धि हासिल भएको हो ।
आर्थिक वृद्धिमा आएको सुधारसँगै नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विगत दुई वर्षयता कुल गार्हस्थ्य बचतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपातमा वृद्धि हुँदै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विप्रेषण आप्रवाहका कारण आव २०७४/७५ मा कूल राष्ट्रिय बचतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४३.९ प्रतिशत रहेको छ । कुल पूँजी निर्माण अनुपातमा विस्तार आई ५१.८ प्रतिशत पुगेको र स्रोत अपर्याप्तता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.८ प्रतिशत रहने देखिएको छ ।